Vashumiri Veungano Vanobatsira Sei?
Kushanda paImba yeUmambo
Bhaibheri rinotaura nezvemapoka maviri evarume vanoita mabasa muungano. Rinotaura “nezvevatariri nevashumiri veungano.” (VaFiripi 1:1) Kazhinji ungano imwe neimwe inenge iine hama dzakati kuti dzinoshumira sevakuru nevashumiri veungano. Vashumiri veungano vanoita mabasa api muungano?
Vanobatsira dare revakuru. Vashumiri veungano varume vakasimba pakunamata, vakavimbika, uye vanoita basa ravo nemazvo. Vamwe vacho vanenge vari vechidiki asi vamwe vanenge vati kurei. Vanoita mabasa anokosha anofanira kugara achiitwa muungano nepaImba yeUmambo. Izvi zvinoita kuti vakuru vakwanise kuisa pfungwa dzavo pakudzidzisa ungano uye pakuifudza.
Vanoita mabasa anobatsira ungano. Vamwe vashumiri veungano vanoshanda sevarindiri vachitambira vanhu vese vanouya pamisangano. Vamwe vanoona nezvegudzanzwi, kupa vanhu mabhuku, akaunzi dzeungano, uye kupa vanhu vemuungano ndima kana kuti nharaunda dzavanofanira kushanda pakuparidza. Vanobatsirawo pakuchengetedza Imba yeUmambo yakanaka. Vakuru vanogona kuvakumbirawo kuti vabatsire vakwegura vari muungano. Pasinei nekuti ibasa ripi ravapiwa, vashumiri veungano vanoda kuita mabasa iwayo uye izvi zvinoita kuti vese vari muungano vavaremekedze.—1 Timoti 3:13.
Vanoratidza muenzaniso wakanaka kune vamwe vaKristu. Vashumiri veungano vanosarudzwa kuti vaite basa ravo nekuti vanenge vaine unhu hwakanaka hunotarisirwa kuvaKristu. Pavanodzidzisa muungano vanosimbisa kutenda kwedu. Pavanotungamirira muushumiri, vanoita kuti tidewo kuita ushumiri. Vanoshandira pamwe nevakuru, uye izvozvo zvinoita kuti ungano ive nemufaro uye ibatane. (VaEfeso 4:16) Nekufamba kwenguva vanozogona kushandawo sevakuru muungano.
Vashumiri veungano vanhu vakaita sei?
Vashumiri veungano vanobatsira sei kuti zvinhu zvifambe zvakanaka muungano?
Pese paunoenda kuImba yeUmambo, wana nguva yekuzivana nemumwe wevakuru kana vashumiri veungano kusvikira wava kuvaziva vese nemhuri dzavo.
Ungano dzeZvapupu zvaJehovha Dzakarongwa Sei?
Ona kuti tinotungamirirwa uye tinopiwa sei mirayiridzo pachishandiswa urongwa uhwu.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Vashumiri Veungano Vanobatsira Sei?
jl chidzidzo 16